“Mba Handeha Hiaraka Aminareo Izahay”—Zakaria 8:23
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibanag Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Javaney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Lamba Letonianina Lhukonzo Litoanianina Luganda Luo Macua Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ngangela Nias Norvezianina Nyungwe Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sena Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Shona Sidama Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tshwa Turkmène Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Zandé Zapoteky (Andilan-tany)
“Mba handeha hiaraka aminareo izahay, fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra.”—ZAK. 8:23.
HIRA: 65, 122
Inona no porofo fa tanteraka ankehitriny ny Zakaria 8:23?
Ahoana no tokony hiheveran’ny Kristianina voahosotra ny tenany?—1 Kor. 4:6-8.
Nahoana no tsy tokony hampiady saina antsika ny isan’ny olona mihinana amin’ny mofo sy divain’ny Fahatsiarovana?—Rom. 9:11, 16.
1, 2. a) Inona no nolazain’i Jehovah fa hitranga ankehitriny? b) Inona no hodinihintsika ato? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
NASAIN’I Jehovah naminany i Zakaria hoe: “Amin’izany andro izany, dia hisy olona folo avy amin’ny fiteny rehetran’ireo firenena hihazona ny akanjon’ny Jiosy iray, ka hanao hoe: ‘Mba handeha hiaraka aminareo izahay, fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra.’” (Zak. 8:23) Tanteraka izany ankehitriny. Iza ilay hoe “Jiosy iray”? Ny Kristianina voahosotra na “Israelin’Andriamanitra.” (Gal. 6:16) Ireo “olona folo” mihazona ny akanjon’ilay Jiosy kosa, dia ireo manantena hiaina mandrakizay eto an-tany. Faly izy ireo miara-miasa amin’ny voahosotra. Fantany mantsy fa mitahy an’io antokon’olona io i Jehovah.
2 Nanamafy koa i Jesosy fa tena hiray saina ny vahoakan’Andriamanitra. Marina fa nilaza izy hoe hizara ho antokon’olona roa izy ireo, ka antsoina hoe “ondry vitsy” ny iray, ary “ondry hafa” ny iray. Ho “andiany iray” ihany anefa izy rehetra, ary ho “iray ihany ny mpiandry” azy. (Lioka 12:32; Jaona 10:16) Mipetraka anefa ny fanontaniana hoe: 1) Mila mahalala ny anaran’ny voahosotra rehetra ve ny ondry hafa? 2) Ahoana no tokony hiheveran’ny voahosotra ny tenany? 3) Inona no tsy tokony hataonao raha misy olona eo anivon’ny fiangonanao lasa mihinana amin’ny mofo sy divain’ny Fahatsiarovana? 4) Tokony hiady saina ve ianao rehefa mahita hoe mitombo ny isan’ny olona manao izany? Handinika an’ireo isika izao.
MILA MAHALALA NY ANARAN’NY VOAHOSOTRA REHETRA VE ISIKA?
3. Nahoana isika no tsy afaka mamantatra hoe iza marina no ho lasa anisan’ny 144000?
3 Mila mahalala ny anaran’izay voahosotra mbola eto an-tany ve ny ondry hafa? Tsia. Nahoana? Marina fa voantso ho any an-danitra ilay olona. Vao fanasana fotsiny anefa no azony, fa mbola tsy azo antoka tanteraka hoe ho any tokoa izy. Izany no mahatonga an’i Satana hampiasa ‘mpaminany sandoka mba hamitahana hatramin’ny olom-boafidy aza, raha azony atao.’ (Mat. 24:24) Tsy ho fantatra mihitsy hoe tena ho any an-danitra ilay olona, raha tsy i Jehovah no manapa-kevitra hoe mendrika ho any izy. Raha hitany hoe tsy mivadika ilay olona vao hasiany tombo-kase farany, alohan’ny hahafatesany na alohan’ny “fahoriana lehibe.” (Apok. 2:10; 7:3, 14) Ho lany fotoana fotsiny àry izay miezaka mamantatra hoe iza amin’ny vahoakan’i Jehovah no ho lasa anisan’ny 144000. 
4. Ahoana no hahafahantsika “handeha hiaraka” amin’ireo voahosotra mbola eto an-tany, raha tsy fantatsika ny anaran’izy ireo?
4 Ahoana àry no hahafahan’ny ondry hafa “handeha hiaraka” amin’ireo Israelita ara-panahy mbola eto an-tany, raha tsy fantany ny anaran’izy ireo? Hoy i Zakaria ao amin’ilay andininy: ‘Hisy olona folo hihazona ny akanjon’ny Jiosy iray, ka hanao hoe: “Mba handeha hiaraka aminareo izahay, fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra.”’ Marina fa “Jiosy iray” no voaresaka eo, nefa misy hoe “aminareo” sy “anareo” koa eo. Midika izany fa tsy olona iray ilay hoe “Jiosy iray” fa olona maromaro. Tsy ilaina àry ny mamantatra azy ireo tsirairay, ary avy eo manaraka azy. Ilay antokon’olona kosa no tokony hofantarintsika sy hotohanantsika. Tsy mampirisika antsika hanaraka olon-tokana mihitsy ny Soratra Masina. I Jesosy ihany no Mpitarika antsika.—Mat. 23:10.
AHOANA NO TOKONY HIHEVERAN’NY VOAHOSOTRA NY TENANY?
5. Inona no fampitandremana tena tokony hosaintsainin’ny voahosotra, ary nahoana?
5 Tena tokony hosaintsainin’ny voahosotra ilay fampitandreman’ny apostoly Paoly ao amin’ny 1 Korintianina 11:27-29. (Vakio.) Mihinana ny mofo sy misotro ny divay “amin’ny fomba tsy mendrika” ny voahosotra, raha tsy miezaka mifandray tsara amin’i Jehovah foana. (Heb. 6:4-6; 10:26-29) Mila mitadidy koa izy fa mbola tsy nahazo an’ilay valisoany. Mila miezaka foana ‘ho tonga amin’ny tanjona izy, mba hahazo ny lokan’ny fiantsoana avy any ambony, izany hoe ny fiantsoan’Andriamanitra amin’ny alalan’i Kristy Jesosy.’—Fil. 3:13-16.
6. Ahoana no tokony hiheveran’ny voahosotra ny tenany?
6 Nasain’i Jehovah niangavy ny voahosotra koa i Paoly hoe tokony “hitondra tena mendrika ny fiantsoana izay niantsoana” azy izy ireo. Mila manao izany “amim-panetren-tena sy amim-pahalemem-panahy tanteraka, ary amin’ny fahari-po” izy ireo, ka “hifampizaka amim-pitiavana, sy hiezaka mafy hitana ny maha iray ny fanahy ao anatin’ny fihavanana, izay fatorana mampiray.” (Efes. 4:1-3) Manampy ny mpanompon’i Jehovah hanetry tena fa tsy hanambony tena ny fanahy masina. (Kol. 3:12) Manetry tena ny voahosotra, ka tsy miezaka manaporofo hoe ambony noho ny olon-kafa izy. Tsy mihevitra, ohatra, izy hoe manana fanahy masina bebe kokoa. Tsy mihambo koa izy hoe mahay Baiboly kokoa, na hoe nisy zavatra nahariharin’i Jehovah taminy. Tsy mampirisika ny hafa hihinana amin’ny mofo sy divain’ny Fahatsiarovana koa izy, satria hoe heveriny fa voahosotra koa ilay olona. Manetry tena kosa izy ka manaiky hoe i Jehovah no mifidy ny voahosotra.
7, 8. Tsy manantena inona ny Kristianina voahosotra, ary nahoana?
7 Voninahitra be ny hoe voantso ho any an-danitra. Tsy tokony hanantena anefa ny voahosotra hoe hohajahajaina be. (Efes. 1:18, 19; vakio ny Filipianina 2:2, 3.) Tsy niteniteny tamin’olona i Jehovah rehefa nifidy azy ireo. Tsy gaga àry izy ireo raha misy tsy tonga dia mino hoe voahosotra izy. Na ny Baiboly aza milaza fa tsy mety ny mino avy hatrany an’izay olona miteny hoe nahazo fanendrena manokana avy tamin’Andriamanitra. (Apok. 2:2) Tsy mety koa raha milaza amin’ny olona sambany vao mihaona aminy ny voahosotra hoe voantso ho any an-danitra izy. Tsy horesadresahiny amin’olona akory aza izany, mba tsy hanindrahindran’ny olona azy. Tsy hirehareha koa izy hoe hahazo valisoa any an-danitra.—1 Kor. 1:28, 29; vakio ny 1 Korintianina 4:6-8.
8 Tsy mihevitra koa ny voahosotra hoe olo-manga izy ireo, ka izy samy izy ihany no tokony hinamana. Tsy mitady an’izay olon-kafa henony hoe lasa voahosotra izy, mba hifaneraserany akaiky na mba hiarahany mianatra Baiboly. (Gal. 1:15-17) Mampisara-bazana ny fiangonana izay manao an’izany, sady manohitra ny fiasan’ny fanahy masina. Mampihavana sy mampiray saina mantsy ny fanahy masina fa tsy mampizarazara.—Vakio ny Romanina 16:17, 18.
INONA NO TSY TOKONY HATAONAO?
9. Nahoana isika no tokony hitandrina rehefa mahafantatra hoe lasa mihinana amin’ny mofo sy divain’ny Fahatsiarovana ny olona iray? (Jereo koa ilay hoe “ Ny Fitiavana ‘Tsy Manao Izay Tsy Mahamendrika.’”)
9 Ahoana raha misy olona fantatrao hoe mihinana amin’ny mofo sy divain’ny Fahatsiarovana? Nilaza tamin’ny mpianany i Jesosy hoe: “Mpirahalahy avokoa ianareo rehetra.” Hoy koa izy: “Izay manandra-tena no haetry, ary izay manetry tena no hasandratra.” (Mat. 23:8-12) Tsy tokony hanindrahindra olona àry isika, na voahosotra izy na tsia. Mampirisika antsika hanahaka ny finoan’ny anti-panahy, ohatra, ny Baiboly. Ny finoany anefa no asaina tahafintsika, fa tsy hoe asaina manindrahindra azy isika. (Heb. 13:7) Tsy misy olona tokony hoheverintsika ho filohantsika mihitsy. Marina fa milaza ny Baiboly hoe misy olona “mendrika hahazo fanajana roa heny.” Tsy noho izy voahosotra anefa no mahatonga azy ho mendrika an’izany, fa noho izy “mahay mitondra” sy “mikely aina amin’ny fitenenana sy ny fampianarana.” (1 Tim. 5:17) Mety ho sadaikatra àry ny voahosotra raha dokadokafana na hindrahindraina. Ny tena loza aza dia mety tsy hanetry tena intsony izy! (Rom. 12:3) Tsy tiantsika raha ny zavatra ataontsika no mahatonga ny voahosotra iray hanao zavatra tsy tokony hataony.—Lioka 17:2.
Ahoana raha misy olona fantatrao hoe mihinana amin’ny mofo sy divain’ny Fahatsiarovana? (Fehintsoratra 9-11)
10. Inona no hataontsika raha manaja ny voahosotra isika?
10 Inona no hataontsika raha manaja an’izay nofidin’i Jehovah ho voahosotra isika? Tsy hanadihady azy isika hoe ahoana no nahalalany fa voahosotra izy. Tsy tokony hidikiditra amin’ny raharaha tsy mahakasika antsika isika. (1 Tes. 4:11; 2 Tes. 3:11) Tsy tokony hieritreritra isika hoe mety ho lasa voahosotra koa ny ray aman-drenin’ilay voahosotra, na ny vadiny, na ny mpianakaviny hafa. Tsy manaranaka mantsy ilay izy na mifindra ho azy. (1 Tes. 2:12) Tsy tokony hanontanintany ny vadiny koa isika hoe inona no tsapany rehefa mieritreritra fa tsy ho tafaraka intsony izy roa ao amin’ilay Paradisa eto an-tany. Mahakivy ny fanontaniana toy izany. Hitadidy kosa isika fa hanokatra ny tanany i Jehovah ka ‘hanome fahafaham-po ny fanirian’ny zavamananaina rehetra.’—Sal. 145:16.
11. Nahoana isika no ho voaro raha tsy “mandoka olona”?
11 Ho voaro koa isika raha tsy manindrahindra ny voahosotra. Nahoana? Milaza ny Baiboly hoe mety hisy “rahalahy sandoka” hiditra mangingina eo anivon’ny fiangonana, ary mety hiteny mihitsy aza hoe voahosotra. (Gal. 2:4, 5; 1 Jaona 2:19) Mety hisy voahosotra hivadika amin’i Jehovah koa. (Mat. 25:10-12; 2 Pet. 2:20, 21) Aza “mandoka olona” mihitsy àry, dia tsy ho voataona hiala amin’ny fivavahana marina ianao, raha mitaona anao ilay olona. (Joda 16) Raha tsy mandokadoka olona koa ianao, dia tsy ho kivy be na tsy hatoky an’i Jehovah intsony raha mivadika ilay olona, indrindra raha Kristianina be mpahalala ilay izy na efa nanompo an’i Jehovah hatry ny ela.
ARY AHOANA ILAY ISA MIHAMITOMBO?
12, 13. Nahoana no tsy tokony hampiady saina antsika ny isan’ny olona mihinana amin’ny mofo sy divain’ny Fahatsiarovana?
12 Nihanihena taloha ny isan’ireo mihinana amin’ny mofo sy divain’ny Fahatsiarovana. Nitombo foana anefa izany tato ho ato. Tokony hampiady saina antsika ve izany? Tsia. Ireto misy antony vitsivitsy.
13 “Fantatr’i Jehovah ny azy.” (2 Tim. 2:19) I Jehovah ihany no mahalala hoe iza no tena voahosotra. Tsy mahalala an’izany kosa ny rahalahy manisa ny mpanatrika Fahatsiarovana. Isainy fotsiny izay mihinana amin’ny mofo sy divay, ka voaisa hatramin’ireo mihevi-tena ho voahosotra nefa tsy izy. Tonga saina ihany ilay olona atỳ aoriana, ka tsy mihinana amin’ny mofo sy divay intsony. Misy koa mikorontan-tsaina na manana olana ara-pihetseham-po, ka lasa mieritreritra hoe ho any an-danitra. Tsy azo lazaina hoe tena isan’ny voahosotra mbola eto an-tany àry ny isan’ireo mihinana amin’ny mofo sy divain’ny Fahatsiarovana.
14. Inona no lazain’ny Baiboly momba ny isan’ny voahosotra?
14 Hisy voahosotra any amin’ny firenena maro eran-tany amin’ilay fotoana hanangonan’i Jesosy azy ireo ho any an-danitra. Milaza ny Baiboly hoe “haniraka ny anjeliny amin’ny feon’ny trompetra mafy” i Jesosy amin’io fotoana io, ary “ireo dia hanangona ny olom-boafidiny avy any amin’ny vazan-tany efatra, avy any amin’ny faravodilanitra rehetra.” (Mat. 24:31) Hazavain’ny Baiboly koa fa ho vitsy sisa ny voahosotra eto an-tany, mandritra ny andro farany. (Apok. 12:17) Tsy voalaza ao anefa hoe firy sisa no ho tavela eto rehefa manomboka ny fahoriana lehibe.
15, 16. Inona no tokony ho fantatsika momba an’ireo 144000?
15 I Jehovah no manapa-kevitra hoe rahoviana izy no hifidy olona ho lasa voahosotra. (Rom. 8:28-30) Taorian’ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty i Jehovah no nanomboka nifidy ny voahosotra. Toa voahosotra daholo ny tena Kristianina tamin’ny taonjato voalohany. Mbola nisy olona nilaza ho mpanara-dia an’i Kristy, tatỳ aoriana, ary nitohy hatramin’ny fiandohan’ny andro farany izany. Tsy tena Kristianina anefa ny ankamaroany. Noharin’i Jesosy tamin’ny “tsimparifary” izy ireny. Na izany aza, dia nisy olona hita hoe tsy nivadika nandritra an’io fotoana io, ka voafidy ho voahosotra. Nantsoin’i Jesosy hoe “vary” izy ireo. (Mat. 13:24-30) Mbola mifidy olon-kafa hamenoana an’ilay 144000 i Jehovah amin’izao andro farany izao.  Marina fa efa ho tapitra izao ny andro farany. Raha izao anefa i Jehovah vao manapa-kevitra hoe hifidy ny voahosotra sasany, iza moa isika no handeha hanome tsiny azy? (Isaia 45:9; Dan. 4:35; vakio ny Romanina 9:11, 16.)  Aza manao toa an’ireo mpiasa tao amin’ny fanoharan’i Jesosy àry. Nimenomenona izy ireo rehefa nahita ny karama nomen’ilay mpampiasa an’ireo mpiasa tonga farany.—Vakio ny Matio 20:8-15.
16 Vitsy ihany ny voahosotra voafidy ho “mpanompo mendri-pitokisana sy malina”, na dia maro aza ny Kristianina manantena ho any an-danitra. (Mat. 24:45-47) Olona vitsy no nampiasain’i Jehovah sy Jesosy hanome sakafo ara-panahy, tamin’ny taonjato voalohany. Voahosotra vitsivitsy no nasaina nanoratra ny Soratra Grika Kristianina, tamin’izany. Mbola toy izany koa ankehitriny. Voahosotra vitsivitsy no voatendry hanome “sakafo amin’ny fotoana mety” ho an’ny vahoakan’i Jehovah.
17 Inona no nianarantsika tato? Nosokajin’i Jehovah ho roa ny valisoa homeny ny vahoakany. Hiaina mandrakizay any an-danitra ilay “Jiosy” an’ohatra, fa hiaina eto an-tany kosa ireo “olona folo” manaraka azy. Mitovy ihany anefa ny fitsipika asain’i Jehovah arahin’izy ireo. Samy tsy tokony hivadika izy ireo. Samy tokony hanetry tena foana izy ireo sady hiray saina, ary hiezaka hihavana tsara amin’ny olon-drehetra eo anivon’ny fiangonana. Andiany iray ihany isika rehetra, ka hiezaka hanara-dia an’i Kristy daholo satria efa tena akaiky ny farany.
^  (fehintsoratra 3) Hita avy amin’ny Salamo 87:5, 6 fa mety ho fantatra ihany amin’ny hoavy ny anaran’ireo rehetra hiara-manjaka amin’i Jesosy any an-danitra.—Rom. 8:19.
^  (fehintsoratra 15) I Jehovah no mifidy ny voahosotra, na dia milaza aza ny Asan’ny Apostoly 2:33 hoe i Jesosy no mandatsaka fanahy masina amin’izy ireo.
^  (fehintsoratra 15) Miresaka bebe kokoa an’izany ny “Fanontanian’ny Mpamaky” ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Mey 2007, pejy 30-31.
Ny Fitiavana “Tsy Manao Izay Tsy Mahamendrika”
Hoy ny apostoly Paoly momba ny fitiavana: “Ny fitiavana mahari-po sy tsara fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady izay hahasoa ny tenany.” (1 Kor. 13:4, 5) Ilay teny grika nadika hoe “manao izay tsy mahamendrika”, dia midika hoe mamingavinga, na tsy mahalala fomba, na manao zavatra manafintohina. Isika Kristianina kosa tia olona, ka mitandrina mba tsy hampahatezitra na hampalahelo ny hafa.
Ahoana no hanaporofoantsika an’izany? Hohajaintsika tsara ireo mitarika eo anivon’ny fandaminana. Mahita rahalahy solontenan’ny fandaminana, ohatra, isika indraindray any amin’ny fivoriambe na amin’ny fotoan-dehibe hafa. Mety ho mpiandraikitra ny faritra izany, na Betelita, na rahalahy anisan’ny Komitin’ny Sampana, na rahalahy anisan’ny Filan-kevi-pitantanana, na ny mpanampy azy. Azo antoka fa hanaja an’ireny rahalahy ireny sy ny vadiny isika. Tsy hanao hoatran’i Diotrefa mihitsy isika. Tsy nety nandray tamim-panajana an’ireo rahalahy nitsidika ny fiangonany mantsy izy. (3 Jaona 9, 10) Tsy fanahy iniantsika anefa indraindray fa lasa diso manaja loatra an’ireny rahalahy ireny isika, ka lasa manao zavatra tsy mendrika. Ahoana izany?
Marina fa faly isika tafahaona sy tafaresaka amin’ilay rahalahy sy ny vadiny. Tsy manaja azy ireo anefa isika raha hataontsika toy ny olo-malaza izy ireo. Mahalala fomba ve, ohatra, isika raha tsy miera aminy akory fa tonga dia maka sary azy misakafo na manao zavatra hafa? Hasaintsika hanao sonia eo amin’ny bokintsika na Baibolintsika ve izy? Hisisika ho eo aminy ve isika, ary tsy hanaiky mihitsy raha tsy miara-maka sary aminy? Tsy tena tia an’ilay rahalahy sy ny vadiny isika raha manao an’ireo. Lasa hadinontsika koa ny tena antony itsidihany antsika sy ny asa mafy ataony ho antsika. Ary ahoana raha misy olona sambany vao manatrika fivoriambe eo? Inona no ho vokany raha mahita antsika manao an’ireo ilay olona?
Inona àry no hanampy antsika hanaja an’ireny rahalahy ireny nefa tsy hanao izay tsy mahamendrika? Voalohany, tadidio fa i Jehovah irery no tokony hankalazaina sy homena voninahitra. (Apok. 4:11) Faharoa, tadidio fa tsy ratsy ny manaja olona, saingy tsy mety raha lasa manindrahindra azy isika. Tian’ireny rahalahy sy anabavy ireny raha hatao toy ny rahalahy sy anabavy hafa rehetra izy, fa tsy toy ny olo-malaza. (Mat. 23:8) Fahatelo, araho ity toro lalana ao amin’ny Matio 7:12 ity: “Koa izay rehetra tianareo hataon’ny olona aminareo àry, dia mba ataovy aminy koa.” ‘Tsy hanao izay tsy mahamendrika’ isika raha mitadidy an’ireo.